Ra’isul Wasaare Rooble “Waa tallaabo horay loogu qaaday maamul daadajinta doorashada Guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo. – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray December 22, 2020
Ra’isul Wasaare Rooble “Waa tallaabo horay loogu qaaday maamul daadajinta doorashada Guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u rajeeyey Duqa cusub ee degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan in Alle u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo doortay. Isagoo tilmaamay in Xukuumaddu ay dhiirrigalineyso degmooyinka dalka oo dhan in ay doortaan maamulkooda.
“Waa tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday doorashada guddoomiyaha cusub ee Gaalkacyo. Xukuumadeyduna way dhiirrigalineysaa wayna taageereysaa iyo degmooyinka dalka oo dhami doortaan maamulkooda, oo ay lana xisaabtamaan. Tani waxay tusaale u tahay daadajinta maamulka iyo in dadku iyagu doortaan cidda ay doonayaan”.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo socdaal shaqo ku marayay deegaannada Puntland iyo Galmudug muddo 11 casho ah ayaa soo gabagabeeyey, waxuna uga mahadceliyey soo dhaweyntii diirranayd ee uu kala kulmay deegaannadii uu socdaalka ku marayay.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Rooble oo cambaareeyay kana tacsiyeeyay qaraxii argagixiso ee Gaalkacyo.
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan wadatashi ah la yeeshay Ururrada Bulshada Rayidka ah iyo Culima’udiinka Soomaaliyeed